Dabkii California oo weli lala tacaalayo - BBC News Somali
Dabka California waxa uu baabi'iyay kumannaan dhisme
Mas'uuliyiin ku sugan gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inay weli la dagaalamayaan dab ka holcaya 17 goobood oo kala duwan oo ku beegan aagga uu canabka ka baxo ee waqooyiga magaalada San Francisco.
Dab aan sidaa u ballaarnayn oo ka kacay saddex goobood oo kale ayaa la damiyay.
Madaxa xakameynta dabka ee gobolkaasi, Ken Pimlott, ayaa sheegay in horumar laga sameeyay sidii kuwa kale lagu xakamayn lahaa, waxa uuse ka digay in xaaladda ay sii xumeyn karto hawada qalalan iyo dabeylaha xooggan ee halkaas ku soo beegan dabayaaqada todobaadka.
Waxa uu sheegay in sagaal kun oo qof oo ah kooxaha la dagaalama dabka ay ka shaqeynayaan sidii ay u xakamayn lahaayeen dabka, kaas oo lagu tirinayo inuu ka mid yahay kuwii ugu xuma ee soo maray taariikhda California.
Soddon iyo lix qof ayaa ilaa iyo haatan la og yahay inuu dabkaasi dilay kuwa kale oo badanna waa la la'yahay.
TOOS Nin 42 sano ka dib u soo noqday labadiisa xaas balse kala kulmay arrin niyad jab ku riday